Etu ị ga - esi malite inye onyinye na Xfce ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ emeghe ọrụ ngo | Site na Linux
Etu ị ga - esi malite inye onyinye na Xfce ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ emeghe ọrụ
mgbochi | | Ọdịdị / Nhazi, GNU / Linux
Nke a bụ ntụgharị nke ederede na-atọ ụtọ nke m hụrụ, bipụtara n'oge na-adịbeghị anya Jannis Pohlmann kwuru, ọ bụghị ma ọ bụ ihe na-erughị onyeisi oche nke Xfce Foundation ugbu a. Ọ na-ejide ụfọdụ nchịkọta dị mkpa nke ọrụ ahụ dịka Thunar na Garcon. Agbalịrị m idebe nsụgharị ahụ ka ọ bụrụ ihe kwesiri ntụkwasị obi na ihe odide mbụ, yana ụfọdụ mgbanwe iji dabaa n'asụsụ anyị.
Ọ dịla ụfọdụ oge kemgbe m emelitere saịtị a na ọbụlagodi oge m dere ihe bara uru. N’oge na-adịbeghị anya, ana m anata ụfọdụ ozi-e sitere n’aka ndị na-achọ inye aka na Xfce ma chee echiche banyere ịkekọrịta ntakịrị “amamihe” m nwetara kemgbe ọtụtụ afọ ka m na-arụ ọrụ na Xfce ma na-arụ ọtụtụ ọrụ obodo. Ihe ngosiputa m abughi na Xfce ma metuta otutu oru ndi ozo.
Eziokwu dị ilu maka ndị na-achọ ntuziaka ngwa ngwa ịmalite ịmalite inye onyinye na Xfce: ị ga-achọpụta n'onwe gị.
Ọ bụghị na anyị dị umengwụ ma ọ bụ na anyị anaghị anabata ntinye gị. N'ezie, echere m, ọ dị mfe: ị ga-enwekwu ọ excitedụ, nwee mkpali ma n'ikpeazụ, ị ga-enwe ihe ịga nke ọma ma ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ na ihe masịrị gị. Anyị nwere ike inyere gị aka ikpebi itinye oge gị na ọrụ dị mfe, njirimara ma ọ bụ njehie nke anyị ma ọ bụ ndị ọrụ anyị weere na ọ bara uru. Projectsfọdụ ọrụ na-eme ka nke a pụta ìhè, mana na Xfce a na-ezobe ozi a n'ime omimi nke wiki anyị, ebe a bụ ụfọdụ njikọ ị nwere ike ịmasị:
Chepụta GIS - iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ Xfce
Ndepụta atụmatụ ndị achọrọ site na akụrụngwa - nke ndị ọrụ anyị mere
Ndepụta atụmatụ ndị achọrọ maka panel - nke ndị ọrụ anyị mere
N'ụzọ doro anya, ozi ahụ dị n'elu nwere ike ịpụta karịa. Enwere ike inwe njikọ na weebụsaịtị Xfce nke na-eduga na ndepụta echekwara nke ọma. Nke a ọ ga - enyere ndị mmadụ aka? Enwere ike
Ikekwe ọ dị mma na ozi ahụ abụghị sọsọ pịa. Ihe oru mmeghe na-emeghe banyere ịkọ ọkọ anyị. Nke a bụ otú m si tinye uche n'ihe niile m mere kemgbe ọtụtụ afọ. Approachzọ a gosipụtara na ihe ndị mmadụ na-eme na mgbe ụfọdụ na otu ụlọ ọrụ si enweta ego. Iche echiche banyere nke a ugbu a, ọ bụ echiche miri emi na mmalite nke mmadụ (chee echiche: mepụtara na mmelite nke ngwa ọrụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ihe niile)
Were ya mee nkocha nke gi.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibido inye onyinye na ọrụ, nwalee nke a:
Nyochaa oru ngo a ma chee echiche banyere ihe na-adịghị amasị gị na ihe ị chere nwere ike ịbawanye mma.
Gbalịa na-anakọta ozi banyere iberibe na-aka na atụmatụ ị na-eche na-efu efu ma ọ bụ ahụhụ kedụ ihe ị hụrụ.
Gbalịa ịchọta ebe kwesịrị ekwesị iji gbakwunye atụmatụ gị ma ọ bụ mezie gị ahụhụ.
Jụọ ndị mmepe ma ọ bụrụ na ha nwere mmasị na njirimara ị mepụtara ma ọ bụ lelee ma nsogbu ahụ ọ dịworị na ahụhụ Tracker nke oru ngo,
Ihe ndị ọzọ bụ nkwukọrịta na koodu.
Ọ bụghị ọsọ ọsọ n'ihi na ị gaghị enwe ike itinye ihe bara nnukwu uru site na mbido. Ma ọ bụrụ na ị raara onwe gị nye, nwee oge zuru oke iji mee ihe dị iche, ma dị njikere imeziwanye ihe site na nkwụsị, ị nwere ike mechaa ruo ebe ị ga-ewere ọrụ maka ọrụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ ma dị mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Etu ị ga - esi malite inye onyinye na Xfce ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ emeghe ọrụ
Ọ dị m ka ya bụrụ na ihe niile dị nfe dịka na Matrix ahụ, ị ​​maara, jikọọ eriri n'azụ olu anyị ma mụta mmemme…. XD
Ka ọ dị ugbu a, ha kwesịrị ịkụziri mmemme na ụlọ akwụkwọ ọta akara, echere m 🙂
Ezigbo edemede naanị na XFCE SVG ewegoro m ụwa ka m mepee.
Eziokwu bụ na etinyeghị m uche na ndọtị nke akara ngosi. Ọ dị na foto ahụ ma etinye m ya dị ka ihe ngosi na ọ bụ ya.
Ebe ọ bụ na Linux nwererịrị nde mmadụ abụọ gara :)
Ka anyi niile kwado GNU MediaGoblin!